Highlights from the municipal election debate show - DVB Multimedia Group
Highlights from the municipal election debate show
by DVBDadmin · Published December 23, 2014 · Updated December 25, 2014
20/12/14 There will be more candidates than voters in YCDC election day because of failing voter education.
“မြို့တော်ဝန်၊ နောက် အတွင်းရေးမှူးတွေကို သမ္မတက တိုက်ရိုက်ခန့်တာဆိုတော့ လူထုရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ် ၄ ယောက် ဘယ်လောက်စွမ်းဆောင်နိုင်မလဲ သံသယဖြစ်မိတယ်။ လက်ရှိ ဖွဲ့စည်းပုံကိုက ခန့်အပ်တဲ့လူတွေများပြီး ရွေးချယ်ခံနည်းတဲ့ သဘောတရားတွေရှိတယ်။ အခု စည်ပင်ဥပဒေအရ သမ္မတ ညွှန်ကြားချက် အကောင်အထည်ဖော်မယ့်သူကပဲ မြို့တော်ဝန်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ ဒါကလဲ ပြဿနာတခု။”
ဦးကျော်လင်းဦး – စည်ပင်ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသူ
“ရန်ကုန်မြို့ လူဦးရေ ၅ သန်းကျော်မှာ ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိတာက ၄ သိန်းကျော်၊ စည်ပင်ရွေးကောက်ပွဲ မဲပေးမယ့်သူဟာ သတ်မှတ်ချက်အရဆို ၁.၈၅% ပြည့်မီရမှာ အခုက ၁% တောင် မရောက်ဘူး။ ပြည်သူဗဟိုပြုမယ့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါ့မလား စဉ်းစားစရာဖြစ်နေတယ်။ ပြည်သူတွေရွေးချယ်မယ့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၄ ဦး ဘယ်လောက်အရည်အချင်းရှိရှိ လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာလဲ စောင့်ကြည့်ရမယ်။”
ဦးဝင်းထိန် – ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
“ကျနော်တို့မီခဲ့တဲ့ ၁၉၅၆ ခုနှစ်တွေတုန်းကဆို မြို့တော်ဝန်ဟာ ရန်ကုန်ရဲ့သမ္မတလိုပဲ။ ရန်ကုန်မြူနီစီပယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မတီကရလာတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေက မြို့တော်ဝန်ကို ရွေးချယ်ကြတာ။ အစိုးရကနေ တိုက်ရိုက်ခန့်အပ်တာ နည်းတယ်၊ လူထုရွေးချယ်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များတယ်။ အရင်ခေတ်က မြို့တော်ဝန်တွေဟာ ရန်ကုန်မြို့နဲ့ပတ်သက်ရင် သူ့မှာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်၊ လွှတ်တော်ကလွဲပြီး တခြားသူ လွှမ်းမိုးလို့မရဘူး။ အခုခေတ်မြို့တော်ဝန်ကတော့ ခိုင်းတာလုပ်ရတာလေ။”
ဖိုးသောကြာ(ခေတ်မိုး) – မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီ(ယာယီ) ဒု ဥက္ကဋ္ဌ-
“အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ရော လူငယ်တွေအတွက်ပါ ကိုယ်စားပြုပြောချင်တာက ဒီစည်ပင်ရွေးကောက်ပွဲ မှာ တအိမ်ထောင်မဲတပြားစနစ်ကြောင့်ပဲ လူငယ်ထုနဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ပါဝင်ခွင့်လုံးဝမရဘူးလို့ သုံးသပ်ချင် တယ်။ မဲပေးနိုင်တဲ့သူတွေ မဲစာရင်းတွေလည်း တော်တော်များများကျန်နေတယ်။”
ဒေါ်မြနန္ဒာသင်း – နယူးမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အတိုင်ပင်ခံ
“စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံမှာကိုက ပြည်သူဗဟိုပြုလုပ်ပေးမယ့် ကိုယ်စားလှယ် အားနည်းနေတယ်။ ပြည်သူလက်ခံမယ့်၊ ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်မှ ပြဿနာတွေဖြေရှင်းလို့ရမှာ။”
ဦးမြင့်မိုရ်ဆွေ – စာရေးဆရာ
“စည်ပင်ရွေးကောက်ပွဲနည်းဥပဒေတွေ ပြည်သူကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ချမပြဘူး။ ဒီရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာ တာကလည်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အမတ် ဒေါက်တာ ညိုညိုသင်းကြိုးစားမှုကြောင့်..အစိုးရက ဒီရွေးကောက်ပွဲကို စိတ်မ၀င်စားဘူး၊ ပြည်သူကိုလည်း လှုံ့ဆော်တာတွေ မလုပ်ဘူး။ နောက် နိုင်ငံရေးပါတီ ကင်းရှင်းရမယ် ဆိုတဲ့ ကန့်သတ်ချက်က နည်းလမ်းမကျဘူး။ စည်ပင်ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာ နိုင်ငံရေးပါ ကို ပါရတယ်. ဒါဟာ ဒီမိုကရေစီအားစမ်းပွဲတွေလေ။”
ဦးနေ၀င်းစံ – စာရေးဆရာ
Next story About the next debate:River Dams and Power Cuts
Previous story Have your say, complete the DVB Debate survey!